Kana uri kutsvaka rakananga Roulette mutambo nyore asi chaizvoizvo zvinhu uye Graphics, European Roulette ndiyo yakanakisisa rimwe iwe. Muizvi Free Roulette Site bhonasi, unogona kutamba pauwandu 1 kuti 36 uye rimwe razero. The nhamba randomly chiratidzo humwewo tsvuku uye dema makwapa pamusoro Roulette vhiri. The 3D Graphics pamusoro mutambo uyu anopa chaizvo chiitiko aine pedyo-up maonero vhiri. Saka unogona kuona zvakajeka bhora tikaisa uye parinogona dzinotaurwa. Pane tireki vachitamba pfungwa iri musiyano uyu zvakare. The vachitamba miganhu mutambo uyu kutanga zvishoma pamusoro £ 0,20 kuti vaifanira kubva £ 100 paminiti nechinzvimbo.
Pamusoro yokuvaka kuti European Roulette
Izvi nenyanzvi yakagadzirwa Free Roulette Site bhonasi mutambo akasikwa NetEnt. Imwe Developers pakukura munyika nemazana mitambo kubva casino Categories dzakadai cheap car insurance, tafura uye mhenyu Dealer mitambo.
In nyore ichi Free Roulette Site bhonasi mutambo, unogona isa vachibhejera zvinhu zvenyu pamusoro nhamba siyana kusanganisira kunze vachibhejera zvinhu. The nzvimbo apo unogona kukunda soro mubayiro kuroorwa kubuda 35 nguva yenyu zvachose vachitamba uwandu. Pane zvina mukati akasiyana vachibhejera zvinhu zvakawanda kuti unogona kukunda kubva. The paradzanisa ine zvakasiyana nhamba mbiri uye inobhadhara 17 kune mumwe apo balls kunyika iri chero vaviri ivavo. Saizvozvowo, mugwagwa une nhamba nhatu wechikamu mari pamusoro 11 kune mumwe. Corner ine nhamba mana uye inobhadhara 8 kune mumwe. pakupedzisira, mutsetse ane nhamba nhanhatu anobhadhara 5 kune mumwe ari wako zvachose bheji.
The yakanakisisa chinoratidza slots ichi ndechokuti rinogona muchinangwa paIndaneti cheap car insurance hapana dhipoziti Mobile uye zvimwe, bhonasi zvinhu zvinogona kukonzerwa kana kunyika nhatu kana kupfuura nyika paradzira zviratidzo pose pamusoro Gwenzi. Kana mukuita izvi, ipapo iwe achapiwa gumi POSH vakasununguka Muruoko rwake anobata chirukiso. Ose Win akaita panguva kumativi ichi chichange kane 2x uye kana dzomusango rinobatanidzwa ipapo ndichawanza kubudikidza 4x. Kana iwe uri rombo zvakakwana uye vane zvimwe kukwanisa kunyika mamwe Anoparadzira matatu, ipapo hauzoregi iwe kuzodzosera chirwise Muruoko rwake anobata chirukiso.
kunze Betting: Kune mhando shanu akasiyana kunze vachibhejera zvinhu kuti iwe unogona kukunda kubva. The red-dema, soro-shoma, shamisa, kunyange, Mbiru uye dhazeni ndizvo nzvimbo. The payouts pano vari 1 kuti 1 kunze sa uye dhazeni pamwe 2 kuti 1. Mukana aya vachitamba akanaka kupfuura mukati vachibhejera zvinhu saka anoramba iwe ari kuhwina muoti.
Game Results: This Free Roulette Site bhonasi mutambo zvinoratidza migumisiro okupedzisira mitambo gumi pamusoro huru chidzitiro. Panewo nhoroondo Tab inoratidza iwe migumisiro wokupedzisira 100 mitambo. Stats izvi kukubatsira kutamba munhu anobudirira nzira nokuda mitambo yako yemberi.
With pfungwa-anoridza 3D Graphics uye inonakidza zvinhu kuti akubatsire kuhwina nyore, ichi Free Roulette Site bhonasi mutambo une yakadereresa imba kumucheto 2.7%.